Maxaa bidix ah Burburkii kadib?: Teendhooyinkii Magaalada Waa la nadiifiyaa ka dib markii aan tabaruc laga qaadin Howlihii 'Gargaarka' - Gargaarka Musiibada ee Isku-Duwaha.
Home/updates/Maxaa bidix ah Burburkii kadib?: Teendhooyinkii Magaalada Waa la nadiifiyaa ka dib dadaalkii aan faa'iido doonka ahayn ee loo qabtay dadaalka “Gargaarka”
Bishii Diseembar 11, 2018, oo ku taal magaalada Panama, Florida, magaalo teendho oo weyn oo ku dhex taal baarkinka kaniisadda ayaa loo beddelay goob dumis. Boqolaal dad ah ayaa ku haray meel aan la aadi karin, inbadanna waxay wada lahaayeen wixii ay haysteen oo dhan. Ka saarida waxaa kormeer ku sameeyay Alabama-West Florida Conference ee United Methodist Church (AWFUMC). Hoos waxaa ku yaal sheekada sida ay u marin habaabiyaan una u maareeyaan dadka nugul ee Panama City, boqolaalna uga xumaadeen intii aysan imaan.
“Qaxwahaasi wuu liitaa,” qof tabaruc ah ayaa soo jeediyay. "Aynu ka dhigno dufcadda xigta mid xoog leh oo aan isu geyno si ay xitaa iyada lafteeda u baxdo." Waxaan isu diyaarineynay inaan booqano magaalada teendhooyinka u dhow aroortii Diseembar 11, 2018. Habeen hore, Panama City waxay aragtay heerkulka 30s, waxaanan dooneynay inaan sii wadno taageerada aan u fidinno dadka deggan xaafada baabuurta la dhigto ee baabuurta, teendhooyinka iyo gogolyada.
Intii aan kafeega u adeegaynay goobta kaniisadda Forest Park United Methodist Church, waxaa yimid lix gaari oo booliis ah.
Bilayska ayaa si kooban ula hadlay saraakiisha United Methodist gudaha kaniisadda dhexdeeda, ka dib waxay bilaabeen digniino taleefanka gacmeedkooda mobilada ah, iyagoo u sheegaya dadka deegaanka inay haystaan ​​seddex saacadood inay xirxiraan alaabtooda oo dhan ayna ka baxaan dhismaha ama waa la xiri doonaa. Duqa Magaalada Panama wuxuu taageeray ka saarida isagoo leh "kani ma jiri karo."
Magaalada teendhooyinka waxay kortay qiyaastii hal bil ka hor, maadaama qoysaska ay soo barakaceen Hurricane Michael ay arkeen naftooda oo aan haysan meel ay aadaan waxayna shaqaalaha muhaajiriinta ahi yimaadeen magaalada iyagoo raadinaya inay ka caawiyaan dadaalada dib u dhiska. Dhowr toddobaad ka dib samaynta magaalada teendhooyinka iskaa wax u qabso ah, wakiilkii ugu horreeyay ee Shirka Alabama-Galbeedka Florida ee Kaniisadda United Methodist Church ayaa yimid. Toddobaad ka hor guuritaanka, Hurricane Michael Soo-kabashada Maamulaha Shirka Alabama-West Florida, Shawn York, wuxuu sameeyay khudbad naxdin leh oo ku saabsan inuu yahay dad caqiido ah oo iska caabin doona magaalada uu damacsan yahay ka bixitaanka xerada. Markii maalmihii sii socday, mas'uuliyiinta Methodist waxay ballanqaadyo dheeri ah u sameeyeen dadka deggan xerada iyaga oo ka caawinaya xallinta mashaakilkooda, iyo "maahan inaad ku garaacdo jidka." Si kastaba ha noqotee, sida ay u muuqatay maalinta ka saarista, kaliya maahan oo keliya. ku guuldaraystaan ​​in ay diidaan, waxay si firfircoon u kormeereen oo haginayeen ka saarida booliiska.
Jahwareerka iyo argagaxa: Musiibo cusub
Wixii ku bilowdey sidii subax deggan oo kafee la wadaaga dadka deggan xerada ayaa si dhakhso leh u galay argagax iyada oo qoysasku ay u ordeen inay xiraan alaabtooda iyadoo ay jirto halis ku jirta in la xiro.
Nasiibdarro, aragtida dadka ka badbaaday musiibada ee lagu qasbay inay qurbo-joog sare ahaadaan ma ahayn kuwa dhibay Shirkii Alabama-West Florida ee wakiillada Kaniisadda United Methodist – in kasta oo teendhooyinka ay haystaan ​​alaabooyin qaali ah oo qaali ah, daawooyin badbaadiya, aruuriyay cunno iyo cabbitaan. iyo sahayda kale ee looga baahan yahay badbaadinta bannaanka, cusub oo ay ku tabaruceen bulshada maxalliga ah, dhammaantood waa la xoogsheegtay oo la burburiyey. Waxa ku dhibay waxay ahayd aragtida dadku ay duubaya filimkan dumay ee nolosha dadka. Dadka fiidiyowga ka duubaya ama ka caawinaya dadka deggan teendhooyinka deggan magaalada sidii ay u badbaadin lahaayeen alaabtooda ayaa mid ka mid ah looga xadgudbay hantida. Shirka Alabama-Galbeedka Florida ee Kaniisadda United Methodist Church ayaa markaa kor u qaaday hanjabaaddooda ah in la soo xiro, baabuurta la xareeyo (qaar badan oo ka mid ah guryaha dadka), teendhooyinka, alaabtooda shaqsiyadeed, iyo tobanaan kun oo doolar. Shawn York wuxuu xusey in laba qof oo ku habboon astaamaha saxda ah iyo kuwa ay u maleeyeen inay mudan yihiin in laga caawiyo guryaha. Laakiin kaliya “caawinaad” Shirweynaha Alabama-West Florida ee Kaniisadda United Methodist Church ee la siiyo dadka deggan teendhooyinka badankood waxay ahayd fuul bas loo raaco $ 10-halkii guriba hal habeen Pensacola. Kuwa aan aqbalin waxaa laga tegay laba ikhtiyaar oo ah: u kala firdhi xuduudaha ama waji wajiga.
Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabihii aan aragnay sida ay maalintu u xirneyd:
Nin waayeel ah ayaa si tartiib tartiib ah u riixay gaari xamuul ah, oo aad u sarreeyay wixii uu haystay oo dhan, kana fog teendhada magaalada. Halkee? Ma uusan ogeyn. Meel fog.
Midkeen wuxuu u kaxeeyey nin meeshiisii ​​shaqada markii ugu dambeysay. Magaaladii teendhada la'aanteed, wuu sii wadan kari waayey shaqadiisii ​​oo wuxuu ku qasbanaa inuu ka bilowdo hoyga ku yaal Tallahassee. Ka hor inta ayan isaga tuurin, waxay ka soo saartey shandadeeda gacmihiisa. Waxay ahayd wax walba, laakiin uma aysan dareemin inay ku filan yihiin.
Nin harraad qaba, arrimaha neefsashada sare, oo hadda kacsanaan iyo walaac iyo argagax ka muuqdo, ayaa istaagay dhinaca. Wuxuu daahiyay booqashadiisa caafimaad ee loo baahnaa maxaa yeelay wuxuu ku tuhmay in haddii uu tegi lahaa cisbitaalka, waqtiga uu baxayo, wax walba oo magiciisa la tirtiri lahaa. Waxaan ka caawinay inuu caydhiyo alaabtiisa si markaa loo jiifiyo isbitaalka, waxaanan ka caawinay inuu helo meel ku-meel-gaar ah ka dib.
Naag qalalaase gashay oo gadaal iyo gadaal u socota. Kadib markii ay lumisay ku dhawaad ​​wax kasta oo Hurricane Michael ah, gaariga xamuulka ah iyo tareenka wuxuu ahaa waxa ay isaga iyo wehelka ay ka tageen. Gawaaridooda iyo trailerkooda ayaa naafo ahaa maadaama qof isku dayay inuu ku guuldareysto inuu xado dhowr maalmood ka hor. Wakiilka AWFUMC wuxuu balanqaaday inuu gacan ka geysan doono hagaajinta gaariga wuxuuna hubiyay inay haystaan ​​ugu yaraan toban maalmood oo dheeri ah. Saacad ka dib, isla wakiilkii ayaa u sheegay lammaanaha in gaarigooda iyo gurigooda ay ahaayeen daqiiqado markii la qabtay. Waxaan jiidi jiidka iyo baabuurka gawaarida.
Haweeney ayaa baaris ku sameysay qashin qashin bulshyo badan leh, iyadoo si xamaasad leh u raadineysa daawada sonkorowga iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah. Van qoyskeeda ayaa la qabqabtay ka dib markii AWFUMC u yeertay shirkad jiidis si ay u jiidaan dhammaan baabuurta haray iyo tareenka.
Daraasiin dad ah, oo ay ku jiraan qoys leh sideed caruur ah, ayaa ka soo noqday shaqooyinkoodii iyo iskuuladoodii, si ay u helaan teendhooyinkoodii, dharkoodii, iyo alaabo kale oo lagu tuuray qashin qashin ah.
Hooyo kelideed ah, oo si sharci darro ah looga soo saaray gurigeeda oo kuyaal Lynn Haven duufaanta ka dib, ka dibna mar kale laga saaray teendhada magaalada, ayaa u keentay gawaarida U-Haul iyo taayirrada si ay u badbaadiyaan alaabooyinka dadka laakiin way ka leexatay oo uma oggolaanin AWFUMC. Maaha in la dhaqaajiyo, waxay hadda lacag la siisaa qoysaska kale ee leh caruur si ay isugu dayaan inay qof walba guryo galaan, xitaa haddii qoysas badan ay ku wadaagaan hal aqal.
“Waxaan ka badbaaday Duufaanta Michael, si aan u sii galno duufaano kale: 'Hurricane teendho magaalada,'" Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa xusay ka dib markii ku dhowaad dhammaan alaabteeda, oo ay ku jiraan alaabada muhiimka ah ee hooyadeed ka soo dhacday, lagu lunsaday guriga. La mid ahaanshaha khibradaha dadka saboolka ah ee ku noolaa Hurricanes Katrina, Maria iyo Florence, aafooyinka dabiiciga ah waxaa had iyo jeer raaca masiibooyinka naqshadaha aadanaha. Duufaanta Michael ayaa ka reebban.
Sifaynta slumce sidii Gargaarka Musiibada
Dhaleeceynta iyo wada noolaanshuhu waxay calaamad u yihiin isdhaxgal kasta oo Shirweynihii Alabama-West Florida ee Kaniisadda United Methodist Church ay la leeyihiin dadka deggan teendhooyinka magaalada, in kasta oo hadal haynta ay ka taagan tahay “dib u soo celinta sharafta dadka teendhooyinka magaalada. Axadaha, laakiin waxaa la sheegay in loo baahnaa in lagu lugeeyo hareeraha bannaanka kaniisadda, laga horjoogsaday u dhowaanshaha irridda iyo ka bixidda xilliyada adeegyada sababo la xiriira "hanjabaad" deganeyaashu ku xardhan yihiin.
Markii ay timid, Shirka Alabama-West Florida Conference ee United Methodist Church wuxuu dhistay teendho weyn oo ku filan aroos, halkaas oo ay fadhiyeen oo sugayeen in dadka deegaanka ay soo galaan oo ay weydiistaan ​​caawinaad. Codadka ku saabsan ka saarida waxay bilaabatay usbuucyo ka hor, laakiin qofna uma muuqan inuu si buuxda u fahmayo goorta ay taarikhdu noqon doonto iyo tallaabada AWFUMC ay qaadi karto si loogu caawiyo dadka ka hor taariikhda ugu dambeysa. In kasta oo xubnaha kaniisadda iyo AWFUMC ay u muuqdeen in ay wadaagaan damac ah in dadka laga caawiyo sidii ay u dhaqaaqi lahaayeen, qofna uma muuqan in uu ku dhaqaaqay dadaal culus si uu u faafiyo macluumaad toos ah. Wax calaamado ah lama dhajin, oo qofna kamuu hadlin xero cod-weyne ilaa sedex saac kahor guuritaanka. Shawn York ee AWFUMC waxay soo saartay aragtidooda “xushmeynta iyo waxqabadka ugu wanaagsan” iyaga oo kormeeraya saraakiisha booliiska ee Panama City ee u adeegsanaya dhagarqabeynta teendhooyinka teendhooyinka ee cabsi-galinta, xayiran ka-badbaadayaasha iyo shaqaalaha oo halis ugu jira in la xiro - sedex saac oo ogeysiis ah. Xitaa duufaanta Michael waxay siisay Panama City digniin ka badan tan AWFUMC ay ka yeelatay.
Xoogga ku kala firdhay teendhooyinka magaalada dadka tirada badan ayaa hadda la silcaya barokac kale iyo dhaawacyo dheeraad ah waqti ay si aad ah ugu baahnaayeen daryeel iyo sharaf si ay u soo kabsadaan. Dadka ka soo jeeda magaalada teendhooyinka ah ee wali la halgamaya raasamaal-maal, masiibo cimilo, dagaal dabaqadeed iyo saboolnimo ayaa wali ku sii jira - hadda uun waa ku habboon yihiin meel aan laga arkin.
Si loogu daro cay dhaawac, hal maalin ka hor guuritaan lama filaan ah, Shirka Alabama-West Florida ee Kaniisada United Methodist Church "Si farxad leh ayay ugu dhawaaqeen" naftooda inay yihiin qaatayaasha $ 628,768 deeqaha lagu guuleystey qayb ahaan qeybtooda doorka weyn ee kaalmaynta dadka barakacay. In kasta oo aan xaqiijin karin xiriir kasta oo ka dhexeeya deeqda iyo ka saarista, waxaan u maleyneynaa in waqtiga ku soo arooray kaliya uu sumcad dheeri ah ka helayo fikradda AWFUMC ee masiibada.
Gumeysiga musiibada waxaa ka mid ah labadaba qabsashadii adag ee ciidamada qalabka sida US Army, National Guard, ICE, kooxaha macaash doonka ah, iyo fulinta sharciga, iyo "gumeysiga" gumeysi ee dhismaha warshadaha aan macaash doonka aheyn ee doonaya inuu ka leexiyo muujinta lafdhabarta ee labada dhinac gargaarka iyo tijaabooyinka dadaallada is-abaabul ee is-abaabul. Moodooyinka dhaqanka samafalka ah, xirfadlayaasha aan macaash doonka ahayn waxay isu dhigaan maareeyayaal waxayna xoojinayaan kala soocid baaxad leh oo loogu yeero "kuwa bixiya" gargaarka iyo "qaatayaasha". Magaalada Chico ee gobolka Kaliforniya, baarkinka Walmart ee baabuurta la dhigto ayaa muddo kooban noqotay meel suurto gal ah iyo magan galyo kadib taariikhihii Camp Fire, oo kaliya in la caddeeyo waxaa qoray Walmart Bronsan amniga iyo Saraakiisha Laanqeyrta Cas. Markii aan guriga ka baxaynay iyo wixii ay rabeen, khadkii u dhexeeyay shaqaalaha samafalka, amniga gaarka ah iyo bilayska ayaa si dhib yar loo iftiimiyey.
Waxaan u aragnaa inay muhiim tahay in la garto, xilligan xanuunka iyo naxdinta leh, in dejinta xuduudo shaqsiyadeed ay qayb muhiim ah ka tahay qabashada nooc kasta oo shaqo samafal ah; laakiin waxaan awoodnaa inaan ku qabanno qaab mas'uul ah ama mas'uuliyad darro ah. Waxaan aqoonsan nahay in kaniisad kasta, hoyga hoylaawe ah, ama koox kale oo gargaar ah inay xad u leedahay waxa ay si macquul ah u fulin karaan iyo in aysan waligood caawin doonin qof walba weligiis. Laakiin sidoo kale waxaan marqaati u aragnay sida nacaybka AWFUMC ee dadka saboolka ah ay si toos ah u kaxaysay rabshadahaan rabshadaha wata, kaasoo ahaa mid aan xilkasnimo lahayn, isla markaana ah naxariis darada iyo naxariis darrada. Awood la'aanta AWFUMC ee ah inay si wax ku ool ah ula xiriirto, balanqaadyadoodii beenta ahaa, iyo dayacaad la'aanta qarka u saaran nolosha iyo hantida shaqsiyadeed waxay abuureen dhibaato boqolaal dad ah oo durba ku nool saboolnimo ba'an.
Mid ka mid ah dadka deggan magaalada Callaway oo u guuray ka dib markii geed ku soo dhacay gurigoodii oo alaabtoodii uu markaas burburiyey bulldozer intii lagu jiray ka bixitaanka magaalada teendho ayaa ka turjumaya, “Ka dib markaad hal xaalad naxdin leh u gudubto mid kale, way ku duminaysaa… I Waxay moodayeen inay si dhab ah u caawinayaan dadka, laakiin waxay ahaayeen farshaxan yahano… Waxa loo sameeyay inay noqoto, iyo waxay dhab ahaantii ahayd laba aragti oo kala duwan. ”
Niyad jabku maaha Xulasho
Markay jiritaankeena iyo jiritaanka kuwa aan jeclaa ay khatar ku jiraan, rajo beel ma aha ikhtiyaar. Murqaha ayaa si qotodheer u goyn kara. Had iyo jeer kama hortagi karno ilmada. Laakiin murugadu kama goynayso ceelasha gudaheena ku jira ee aan dhex galno markaan aragno adduun ka wanaagsan kan, adduun aan u soo galno jiritaanka inkasta oo (ama, laga yaabo) sababtoo ah qalbiyadeenna jabsan, gacmaheena codsiyeed. , iyo cagaheenna daalan.
Maxaa ku hadhay burburka kadib? Kaliya xiriirkeena midba midka kale, murugada aan wadaagno, iyo aqoonta ah in abuur kasta uusan soo biqin oo uu ku weynaado geed Oak ama Redwood ama Waqooyiga Galbeedka Florida Pine. Laakiin geed kasta oo xoog leh mar baa bilaabay sidii abuur. Markaa waxaan sii wadi doonnaa abuuridda, waraabinta, barashada, bogsashada, iyo istiraatiijiyadda. Awoodu kor ayay u taagan tahay, oo leh hawo is-beddel ah iyo umuuqdo ilo aan xadidnayn oo la baabi'inayo, Runtu weligeed way sii jiri kartaa, laakiin mustaqbalku wuu ka samaysanyahay halkaas, xagga hoose.
Weli waxaan ku riyoonayaa wixii aan dhisi doonno berri,